warkii.com » Quique Setien Oo Qirtay In Lionel Messi Daallan Yahay, Haddii Uu Nasinayo Kulamada Soo Socda Iyo Khatartii Valladolid Gelisay Oo Uu Ka Hadlay
Quique Setien Oo Qirtay In Lionel Messi Daallan Yahay, Haddii Uu Nasinayo Kulamada Soo Socda Iyo Khatartii Valladolid Gelisay Oo Uu Ka Hadlay
Tababare Quique Setien ayaa qirtay inay dhibaato ka haysato sidii uu u heli lahaa waqti uu nasasho siiyo kabtanka kooxdiisa ee Lionel Messi, maadaama uu horyaalku meel xaasaasi ah marayo oo aanay khamaari karin.
Barcelona ayaa soo gaabisay farqiga dhibcaha ay Real Madrid hoggaanka horyaalka kaga hayso, markii ay xalay 1-0 ku garaaceen Real Valladolid, laakiin labada kulan ee hadhay ayay tahay inay halganka sii wadaan, iyagoo ku ducaysanaya in Los Blancos la qabto, si nasiibkoodu uga caawiyo inay koobka helaan.
Setien oo hadlayay kaddib kulankii Valladolid, ayaa la weydiiyey haddii ay u muuqato in Lionel Messi uu daallan yahay oo ay tahay inuu nasasho siiyo, waxaanu yidhi: “Dabcan. Horena waan u sheegay, laakiin gool-dhalinta ayaa aad la iskugu dhow yahay. Haddii aanu goolal badan dhalin lahayn qaybta hore, waxa laga yaabaa inaanu ciyaartooyo badan nasin lahayn.”
Tababare Setien waxa uu qirtay in kooxdiisu daallanayd kulankii Valladolid oo ay dhibaato kasoo muteen sidii ay u xakamayn lahaayeen, waxaanu yidhi: “Kooxdu way daallanayd. Waxay afka hore ku haysteen ciyaartooyo tayo leh oo inay hore u socdaan ka go’an tahay.
“Garoonka oo dhan maanaan dabooli karayn, Waxay ahayd inaanu dib u fadhiisano, taasina way nagu adkayd.
“Qaybtii hore ee ciyaarta hurdo ayaanu gelin gaadhnay, waxaanu dhalin karaynay laba ama saddex gool, laakiin waxa jiray walaac ah in kaliya 1-0 ay ahaanayso, iyo inay naga dhalin karayeen waqti walba.
“Qaybtii dambe, waanu dhibaatoonay. Waxaanu xaqiiqsanay in ciyaartoydu ay daallan yihiin.”